Umaki: izaziso zohlelo lokusebenza | Martech Zone
Umaki: izaziso zohlelo lokusebenza
Isikhathi esikhethekile sonyaka sesiseduze kakhulu, isikhathi sonke esibheke phambili ekuphumuleni nabathandekayo bethu futhi okubaluleke kakhulu ukuzitika ngezinqwaba zokuthenga ngamaholide. Yize kungafani namaholide ajwayelekile, lo nyaka ume ngaphandle ngenxa yokuphazamiseka okusabalele kwe-COVID-19. Ngenkathi umhlaba usalwela ukubhekana nalokhu kungaqiniseki futhi ubuyela esimeni esejwayelekile, amasiko amaningi eholide nawo azobona ushintsho futhi angahle abukeke ehlukile
Njengoba abathengi bethuthuke ngokuya ekusetshenzisweni kwezindaba eziku-inthanethi futhi benokuningi ongakhetha kukho okutholakalayo, abashicileli bokuphrinta babone ukwehla kwemali engenayo. Futhi kwabaningi, bekunzima ukujwayela isu ledijithali elisebenza empeleni. Ama-paywalls abe yinkinga enkulu, ahambisa ababhalisile kude nobuningi bokuqukethwe kwamahhala. Izikhangiso zokubonisa nokuqukethwe okuxhasiwe kusizile, kepha izinhlelo ezithengiswa ngqo zisebenza kanzima futhi zibiza kakhulu, okwenza zingafinyeleleki ngokuphelele